Oricon ရဲ့ Single chart မှာ နံပါတ် ၁ ချိတ်နေတဲ့ Got7 ရဲ့ New Era
On June 29, 2018 June 29, 2018 By Sora
Got7 ဟာအဖွဲ့ရဲ့ Japan Single album အသစ်ဖြစ်တဲ့ The New Era ကို June 20 မှာ ဖြန့်ချိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Got7 ဟာ kpoper လေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲ idol group တွေထဲက တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုများစွာကိုလည်း သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ Got7 ရဲ့သီချင်းတွေထဲကမှ Mad(2015), Flight Log: Turbulence(2016), Got it?(2014) နဲ့ Flight Log: Arrival တို့ဟာဆိုရင် Billboard chart မှာ နံပါတ်တစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခု The New Era Album ဟာဆိုရင်လည်း စတင်ဖြန့်ချိပြီး ချက်ချင်းဆိုသလို ဂျပန်သီချင်းဈေးကွက်ရဲ့ကုမ္ပဏီအကြီးစားဖြစ်တဲ့ Oricon ရဲ့ Daily Single chart မှာ 9,404 units အထိရောင်းချခဲ့ရပြီး အရောင်းရဆုံးနံပါတ်(၁) ဖြစ်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Album ရဲ့ Track list မှာပုံမှန်အားဖြင့် The New Era, SHINNING ON YOU, The New Era (Instrumental) နဲ့ SHINNING ON YOU (Instrumental) ဆိုတဲ့ သီချင်း ၄ပုဒ် ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Edition ၃ခု ထပ်ကွဲသွားပါတယ်။ ကွဲသွားတဲ့ Edition ၃ခုမှာတော့ Normal Edition ထဲမှာမပါဝင်တဲ့ The New Era Remix (Edition A), HMMMM, HMMMM: Instrumental (Edition B) နဲ့ 2(TWO), 2(TWO): Instrumental (Edition C) စတာတွေပါဝင်မှာပါ။ Got7 ဟာ မေလ ၄ ရက်နေ့ကစပြီး Eyes On You Album အတွက် World Tour ကို Seoul မြို့ကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် World Tour ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပြီး The New Era အတွက် ဂျပန်မြို့၆ မြို့မှာဇွန်လလယ်ကစပြီး Tour ရောက်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ Oricon မှာ Top ဖြစ်နေတဲ့ Got7 ရဲ့ The New Era M/V လေးကိုနားဆင်ကြည့်ပါဦးနော်…………..
PREVIOUS POST Previous post: Album အသစ်နဲ့ နတ်သက်ကြွေလာတဲ့ Girl group အသစ်ဆက်ဆက်လေး Momoland
NEXT POST Next post: လေးနာရီ အတွင်း ကြည့်ရှုသူ 5.4M ကျော်သွားခဲ့တဲ့ XXXTENTATION ရဲ့ SAD! Music Video